﻿	Pizza jupụtara na Pasta Shell - Ezi Ntụziaka
ole ọ ga-ewe ya iji sie ụkwụ ọkụkọ ụkwụ
-esi mee ka ọkụkọ cordon bleu youtube
enwere m ike ịkwadebe poteto scalloped tupu oge eruo
ebe a na-eri ahihia ehi na kabeeji
Pizza jupụtara na Pasta Shell
Nke a bụ ihe nchịkọta dị egwu nke pasta nke ezinụlọ dum ga-ahụ n'anya!
Achịcha pasta ndị a jupụtara na beef na pepperoni na-ejupụta na cheese mozzarella na pepperoni na-atọ ụtọ karị! Nke a na-eme ka nri dị ụtọ nke ọma!
N'iji elu mma Pizza ihendori na-eme nnukwu ihe dị iche na nhazi a. Edemede Brand bụ nke kachasị m mma, ọ nwere nnukwu ekpomeekpo ọhụrụ na m na-azụkarị ya na mkpọ. Ọtụtụ ụlọ ahịa na-ere ahịa na-ebu ya (ọ na-abụkwa mgbe ụfọdụ na mpaghara mpaghara).
M gbakwunyere ose na-acha akwụkwọ ndụ & pepperoni na uzommeputa a n'ihi na ndị ahụ bụ toppings anyị masịrị… ma ọ bụrụ na ị nwere toppings ndị ọzọ ị hụrụ n'anya, usoro a bụ nnọọ vasatail itute dochie soseji maka beef, tụba ụfọdụ ero ma ọ bụ oliv, dochie pepperoni na ham! Mee nke a nke gị… Ọ ga-amasị m ịnụ echiche gị!
More Pasta & Pizza Recipes Ebe a
Ihe ndi ichoro maka uzommeputa a
* Jumbo Pasta Shells * Ogo Pizza Sauce * Ime efere *
rotel mac na chiiz nwere velveeta
5site na6votu NyochaNtụziaka
Shell Sheri Pizza
Oge Nkwadebe5 Nkeji Oge nri40 Nkeji Oge zuru ezuAnọ Nkeji Ọrụ16 shells Onye edemedeHolly NilssonNke a bụ ihe nchịkọta dị egwu nke pasta nke ezinụlọ dum ga-ahụ n'anya! Bipute Ntụtụ
▢15-18 jumbo pasta shells
▢½ paụnd ata ata anụ
▢abụọ mkpụmkpụ galiki mebiri
▢½ yabasị finely diced
▢1 ngaji oregano
▢4 ounce iberibe pepperoni bee ma kewaa
▢1 ose griin okpokoro
▢1 nnukwu tomato okpokoro
▢1 iko ezi mma Pizza ihendori
▢abụọ iko mozzarella chiiz shredred na nkewa
Kpochapu ọkụ na 350 Celsius. Cook shells el dente dị ka usoro ngwugwu. Igbapu ma ewepu ya.
N’ime pan, aja aja na-acha aja aja, yabasị na galik ruo mgbe enweghị pink ga-afọdụ. Igbapu abụba ọ bụla.
Tinye ¾ nke pepperoni ma sie ihe dị ka nkeji 3. N’ikpeazụ, tinye ya na akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ ose, oregano na tomato. Esi nri ihe dị ka minit 3 ma ọ bụ ruo mgbe ose dị ndụ dị nro. Wepu si okpomọkụ ma bido ½ iko mozzarella cheese.
Jupụta shei ọ bụla na ngwakọta pepperoni (ihe ruru 1 ½ tablespoons) ma tinye ya na efere nri.
Top na Pizza ihendori. Kpuchie ya na foil ma kpochaa minit 20-25 ma obu rue mgbe iwe di oku. Wepu foil ma tinye cheese mozzarella fọdụrụ na pepperoni fọdụrụ. Laghachi na oven ruo mgbe agbazere chiiz na nro.
Calorisị:Ogbe 122,Carbohydrates:8g,Protein:10g,Abụba:5g,Abụba Ajuju:1g,Cholesterol:19mg,Sodium:320mg,Potassium:180mg,Eriri:1g,Sugar:1g,Vitamin A:Ogbe 225IU,Vitamin C:8.5mg,Calcium:148mg,Iron:0.8mg
Isiokwupasta shells N'ezieNri abalị Esie yaOnye AmericaEnd SpendWithPennies.com. Ọdịnaya na foto bụ ihe nwebisiinka. Ringkekọrịta nke uzommeputa a gbara ume ma nwee ekele. A machibidoro ibipụta na / ma ọ bụ ịzigharị usoro nri zuru oke na mgbasa ozi ọhaneze. Biko lee iwu ojiji iji foto m ebe a .
Lee ụfọdụ usoro nri ị ga-ahụ n'anya
* Taco jupụtara na Shell * Pasta Pasta * Bọmbụ Pizza *
Ntụziaka ndị ọzọ ebe a
Ọsọ ọsọ Dog Chili
Ezi Nri Ezi Ulo Ahụike
Nri Spaghetti skwọsh
Kọlịflawa Eghe eghe
Skillet Orange Chicken Ntụziaka
Ahịa vs Broth. Kedu ihe dị iche?
Etu esi esi nri Tenderloin
4 Ingredient Ihe Niile Crescent na-apụta